Mpaghara Casino Online na Danish - Codes Bonus Casino
Online cha cha Daashi Codes > Saịtị Casino Online
(655 votes, nkezi: 4.00 si 5)
Loading ...Kemgbe 1948, na Denmark, e nwere otu ọhaneze n'ọgba ịgba chaa chaa, nke ụlọ ọrụ obodo ahụ na-akpọ aha ya bụ Danske Spil. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, mba ahụ na-agba chaa chaa nke ọma, ma na 1990 na Denmark, e nwere iwu ịgba chaa chaa. Ọ bụ ezie na Danske Spil ka na-ejide onwe ya na lotteries na ịnya ịnyịnya, ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya, na ịgba agba kpalakwukwu, nzukọ nke ịgba chaa chaa ndị ọzọ nwere ohere maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana enweghi ike: ụlọ ọrụ ndị mba ọzọ nwere ike imepe ụlọ ịgba chaa chaa na mba naanị iji mepụta otu ụlọ ọrụ na onye di na Denmark, dịka ọmụmaatụ, onye nwe ụlọ.
Rịba ama maka ndị ọbịa na ndekọ ịgba chaa chaa anyị na-eme ugbu a, ụdị nke ịgba chaa chaa na Denmark ga-abụ iwu. Iwu banyere ịgba chaa chaa na Denmark nyere iwu iwu niile nke ọrụ ịgba chaa chaa Danish. Lelee mmezu nke iwu a, ma jikwa okwu ịgba chaa chaa nke ịgba chaa chaa bụ Danish Gambling (Spillemyndigheden).
Ịgba Chaa chaa na Denmark
January 1, 2012 bụ oge mgbanwe na akụkọ ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Denmark. Site n'ụbọchị ahụ wee malite iwu ọhụrụ na-achịkwa ịgba chaa chaa na mba ahụ. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na Danske Spil nọgidere na-ele anya n'ụdị ịgba chaa chaa ụfọdụ, ụlọ ọrụ ndị mmadụ na ndị mmadụ n'otu n'otu nwere ụlọ ọrụ ikikere online n'ịgba chaa chaa na Denmark, karịsịa, ntanetị n'ịntanetị na saịtị egwuregwu na saịtị ntanetị n'ịntanetị. Dịka iwu na ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Denmark, onye ọrụ nke ịgba chaa chaa nwere ike inye ọrụ ịgba chaa chaa n'Ịntanet, ọ ga-anwale ma nweta ikikere na Denmark, yana ịkwụ ụgwọ ụfọdụ.
Ugbua n'ime afọ mbụ nke ịbanye ikike iwu iwu ọhụrụ nwetara 25 ndị na-enye online casinos, tinyere ụfọdụ n'ime ndị na-eduzi mba ụwa dị ka 888, Bwin na Ladbrokes. N'otu oge ahụ, Gọọmenti na-arụ ọrụ mgbe niile na-alụ ọgụ megide saịtị ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Denmark.
Nchịkọta nke ebe Ntanetị Ntanetị Ntanetị kachasị elu nke 10
Denmark Scandinavia a na-akpọ pel abụghị nanị nke a: obere mpaghara nke obodo ọnụ ọgụgụ nke akụ nkịtị na akụkọ ihe mere eme na-agagharị. Ndị SasinoToplists na-agwa gị banyere akụkụ kachasị mkpa nke Denmark, nakwa àgwà ndị Danes na ịgba chaa chaa.
Denmark - ntakịrị ihe omumu na akụkọ ihe mere eme;
Ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-enwe ndị na-egwu egwú na mpaghara nke egwuregwu ịgba chaa chaa;
Akwụkwọ ntinye akwụkwọ ahụ gaa na cha cha.
Casino Mba isii dị na Aalborg, Orhusskae, Cramps, Odense, Helsingor na, n'ezie, n'isi obodo, Copenhagen;
Echiche ise nke Copenhagen isi obodo Denmark na adreesị;
Ezigbo mmasị banyere Denmark na Danes.
Ebe Denmark na obere akwụkwọ akụkọ ihe mere eme
Denmark a na-akpọ Alaeze nke Denmark ziri ezi. Ọ bụ mba dị na Northern Europe na bụ ebe ndịda nke mba Scandinavian. Obodo ahụ dị na ala mmiri dị na Jutland nakwa n'àgwàetiti nta ndị dị n'àgwàetiti ahụ, nakwa gụnyere Faroe Islands na Greenland.
Denmark abughi ndi ochichi ndi ochichi, o kwesiri iburu n'uche na mba ahu bu ala di ike - rue mgbe 19th century ndi eze Denmark "jidere aka ya," nke nile nke Northern Europe. Ugbu a, Faroe Islands na Greenland nwere nnukwu ogo nke onwe na onwe onye. Kemgbe 1972, iwu ndị Denmark bụ 54-th queen aha ya bụ Margrethe II.
Casinos na ịgba chaa chaa na Denmark
Ịkpọtụrụ casinos na mba ahụ mere na 1990 ma na ya na-etinye ntọala ntọala nke ikikere maka ndị si mba ọzọ. Isi ọnọdụ maka ịnye ikikere - onye ọrụ mba ọzọ nke ọrụ ịgba chaa chaa bụ ịmepụta ụlọ ọrụ Danish na ụlọ ọrụ Denmark dị ugbu a. Ụzọ kachasị mfe iji mepụta mmekọrịta dị otú ahụ na isi nke ụlọ nkwari akụ, nke bụ ihe merenụ.
Isoro akụkụ Danish n'ụzọ zuru ezu nwere ike ndị ọrụ dị ka "Holland Casino" site na Netherlands, "Bad Neuenahr" si na Germany, "Casinos Austria"Si Austria. Ụgwọ ụtụ na steeti dị elu, dabere na uru cha cha na ọ na-amalite site na 45% nke ntụgharị oge kwa afọ.
N'oge ahụ, mba ahụ nwere Xinuma ndị isi kasịnụ. Ha dị na Aalborg, Orhusskae, Cramps, Odense, Helsingor na, n'ezie, n'isi obodo, Copenhagen.
Casino Copenhagen. Iwu ndị a na-emekarị na chaa chaa ahụ na-amalite na 14.00 wee kwụsị na 4.00. Gaa na cha cha nwere ike ịbụ mgbe ọ dị afọ 18, ya mere i kwesịrị inwe paspọtụ.
Ihe ọzọ - na nbata ị ga-ajụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnụ ụzọ. Ụbọchị tiketi na-akwụ 95 Danish kroner (ihe dị ka € 12), otu izu - 265, yana n'afọ 2.095 DKK. N'oge okpomọkụ, ị nwere ike ịga na casino na mkpụmkpụ na nkedo, mana uwe ejiji ebe a adịghị anabata.
Naanị mgbe egwuregwu nke poker na cha cha ekwesịghị iyi akwa, jiri iPod na-eyi t-shirts na-enweghị aka uwe. Ma, n'oge ntụrụndụ ụwa dị ka WPT na iwu ndị ọzọ na-asọmpi banyere ọdịdị nke onye ọchịchị.
N'ozuzu, casinos dị na Copenhagen dị ezigbo mma ma na-achọ oké mkpa. O nwere ihe niile nwere ike ịchọrọ mkpụrụ obi onye ịgba chaa chaa: ruleti (Europe na American), ụdị ígwè ọrụ ọ bụla (nhọrọ 140), tebụl maka poker, blackjack , na Punto nke Banco.
Ebe nkiri Copenhagen
Ewezuga njem na-aga n'ihu na ime obodo na Ụlọ Nzukọ a na-ahụ maka ọdịnala, n'akụkụ ndị dị nso, na ihe ncheta nke Little Mermaid, Copenhagen na-aga ileta na nleta pụrụ iche.
ngosi nka "Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị!". Okwu: R å dhuspladsen , 57. N'ime ihe ngosi nka a na-adighi egwu n'okpuru akara di egwu "Kwere ya ma o bu ikwere na ya!" Otu nchịkọta Leroy Ripley - onye njem na onye nchịkọta. Kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ narị njem gburugburu ụwa ọ chịkọta ọtụtụ ihe ịtụnanya. N'ebe a, ị ga-ahụ otu egwuregwu nke Taj Mahal, ọkpụkpụ nke nnukwu anụ, ụbọ akwara, na-egwu egwu n'egwuregwu na ọbụna oké osimiri dị nnọọ mma.
Ụlọ ihe ngosi nka "Uche". Adreesị: Tuborg Havnevej, 7, Hellerup. Ọ bụrụ na ị na-eso ụmụ gị na-agagharị ma ọ bụ na ịchọrọ ịghọta ụdị iwu ahụ dum - ọ bụ naanị ebe zuru oke. Enwere polygraph igwe iji kpọọ ifufe na ala ọma jijiji, na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. A pụrụ imetụ ihe ngosi niile.
Ihe ngosi nka "Ichapu". Adreesị: Østergade 16. Ụlọ ihe ngosi nka enweghị mkpa iwebata, dịka ihe ndekọ Guinness gbasara onye ọ bụla maara. Ma mgbe ị gụrụ banyere ihe ndekọ ọ bụla, mgbe ụfọdụ ọ na-esiri ike iche. N'ebe a, ị nwere ike ịhụ ihe karịrị 500 ngosi nke ihe ndekọ kachasị mmasị, na "ngosi Ọkọlọtọ Na-eme Ihe Ike » ị nwere ike ijide onyinyo gị, gbanwee isi na onye ọzọ na-anọghị ọdụ na ọbụna ịnọdụ ala eletrik.
Ntụrụndụ "Tivoli" Park. Adreesị: Vesterbrogade 3. Ọka ntụrụndụ a bụ nke kasị ochie n'ụwa,, site n'ụzọ, o sitere n'ike mmụọ nsọ mgbe Walt Disney kere netwọk Disneyland. E nweghị supernavorochennogo ebe nkiri, mana enwere ọnọdụ obi ụtọ na ọṅụ.
"Erotica" ihe ngosi nka. Adreesị: Kobmagergade 24. Nke a bụ nke mbụ ihe ngosi nka nke ụwa, ọ pụtara na 1992. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta akụkọ banyere àgwà ndị na-ezighị ezi ebe ọ bụ na Rom na India oge ochie ruo ugbu a. E nwere eserese, ihe osise, foto na vidiyo, nakwa dị ka ihe na-adịghị mma na ụdị ngwaọrụ ọ bụla site na ntụziaka dị mwute. Nbanye maka ihe doro anya, na afọ 18, ma ụmụ akwụkwọ nwere ego nke 50%.
Ezigbo mmasị banyere Denmark na Danes
Ụbọchị ọrụ na-amalite n'isi - dịka 8 dị, ndị Danes na-arụ ọrụ, ma na 16.00 enweghịzi. Ụlọ ahịa na-emechikwa ngwa ngwa, ya mere Danes mere ngwaahịa ndị a zụrụ n'oge ngwụsị izu;
Denmark nwere nnukwu ụtụ isi - nkezi nke 43%. Ọ dabere na ego nke nwa amaala na uru ndị ruru ya;
N'ọrụ, Dane niile na-enweta nri atọ n'ụbọchị. Mgbasa ozi Danish, ụlọ ọrụ ma ọ bụ nzukọ na-enwekarị ụlọ iri nri na osi nri;
Ndị Danland na-arụ ọrụ ụlọ dịka ụmụ nwanyị. Ha na-asacha ala, na-elekọta ụmụ ha, ha anaghị echekwa ịkụ ihe dị ụtọ.
Ezigbo ala na Denmark dị oke ọnụ, ya mere ọ na-adịkarị mma. Oghere nke mgbidi, na mgbe ụfọdụ, ọ bụghị atụmatụ kachasị mma na-ewere ọnọdụ n'ọtụtụ ụlọ.
Na Denmark, nlekọta ahụike n'efu, n'otu oge ahụ ka dọkịta nke ọ bụla dọkịtara ụfọdụ ndị ọrịa. A na-eme nke a na mpaghara mpaghara, ma ọ bụrụ na ị ga-akwaga, mgbe ahụ dọkịta ga-agbanwe;
Denmark - Mba ígwè. Ha bụ ndị a hụrụ n'anya nke ukwuu.
Denmark na map nke Europe
Ịgba chaa chaa na casinos na Denmark
Na ihe atụ nke Denmark, ị ga-ahụ ụzọ nke kwesịrị ịgbaso, ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ bụ ịmepụta ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa mara mma. Ndị Danes, n'agbanyeghị na obi dị jụụ, anaghị echefu oge na cha cha, na ha nwere ohere ọ bụla.
Anyị enweghị ike ikwu ma ọ bụrụ na cha cha na Denmark, ọ bụla ọ bụghị. Mba nwere naanị ndị ọrụ 7 bụ ndị na-enye ikike ikikere, na ngwa abụọ na-echere. Otú ọ dị, ọbụna cha cha, ya bụ, iji zuo mmasị ịgba chaa chaa nke Danes. Site n'ụzọ, na Denmark, ọ bụ ebe obibi nke ndị mmadụ 5 nde mmadụ, na casino 7 na-enweghị ike ịnagide mmeri nke ndị ọbịa. Ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ịga leta mba a magburu onwe ya, jide n'aka na ị ga-aga n'otu n'ime ụlọ ahụ. Ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa na-enwekarị ebe a na-ede akụkọ ihe mere eme, ụlọ nkwari akụ ahụ, ma na-amasị ọbụna na ị ga-eleta.
Na Aarhus, obodo nke abụọ kasị ukwuu na Denmark, na-arụ ọrụ otu n'ime ụlọ ịgba chaa chaa mara mma Danish. A maara ya ọ bụghị naanị maka ọdịdị ya mara mma, kamakwa ọrụ ọrụ. A na-ahụ ụlọ ahụ na họtel nkwari akụ Hotel Royal, bụ nke na-amasị ịnọ na ndị nwere ọgaranya. N'ebe nkwari akụ ahụ, e nwere ọtụtụ ebe ndị mere eme. E nwekwara otu a maara nke ọma na Latin Quarter na ọdụ ụgbọ mmiri na ụlọ ahịa ya.
Maka egwuregwu ndị dị na cha cha nwere tebụl ole na ole iji nbanye na roulette, blackjack na egwu egwu. N'ụlọ nzukọ ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ 80 ụlọ ọrụ mbụ. Ọtụtụ mgbe, mgbidi nke ụlọ egwuregwu na-enye ndị na-eme egwuregwu asọmpi kachasị elu.
Ọmarịcha Denmark, ọ bụ eziokwu na obodo nke ọ bụla, ma ọ bụghị naanị isi obodo, nwere ike ịmalite njem nleta. Otu ga-eche na cha cha cha na Copenhagen, ma ọ bụghị. Otu n'ime ịgba chaa chaa kacha atọ ụtọ na-arụ ọrụ n'obodo Aalborg. Enweghị ụlọ nkwari akụ dị na ụlọ nkwari akụ nke dị n'etiti obodo na gburugburu na-ejupụta na ndụ. Otutu klọb, ụlọ nkwonkwo na obere ụlọ nri ga-eme ka ndị mmadụ ghara ịnwụ. N'ụlọ cha cha, ị nwere ike igwu egwuregwu dị iche iche, poker na egwuregwu ndị ọzọ. E nwekwara ihe karịrị oghere 30, gụnyere jackpots n'ihu.
Otú ọ dị, ụlọ ọrụ kasịnụ Denmark kasị dị na isi obodo ya. O meghere na 1990 n'ehihie nke Afọ Ọhụụ ma bụrụ ebe mbụ ịgba chaa chaa iwu na mba ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ ntụrụndụ kachasị mma, ịkwesịrị ịmalite ịchọ ya na Copenhagen. Ọtụtụ ọtụtụ tebụl na-egwu egwu na ihe karịrị otu narị oghere na-enye ohere ịchọta egwuregwu na-amasị gị. Site na ụzọ, ihe kachasị ememme poker na-ahazi n'ime mgbidi nke ụlọ ọrụ a. Casino na-etinye n'ime otu n'ime ụlọ kacha mma hotels Radisson Blu Scandinavia isi obodo.
Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Denmark
Ihe ndị a chọpụtara nwere ike ịkọwapụta na ndị Denmark na-enwe obere oge ọrụ, ma, ọ dị, ọkara ọkwa - kachasị elu n'ụwa.
Ọ dị ka usoro maka ịga nke ọma (ma ọ bụrụ na ọ dị adị), mana ndị Danes anaghị eji oge ha niile n'efu maka nzukọ Lego.
Ndị na-enweta ego dị elu na mba a na-atụnye ụba n'ịbawanyewanye n'ịgba chaa chaa n'ịntanetị.
Tupu January 1, 2012 onye nwe obodo bụ Danske Spil bụ onye nwere ikikere maka nzukọ ma na-akwụ ụgwọ. Ndị ọzọ nke ndị Danish na ndị mba ọzọ anaghị ekwe ka ha na-enye ntụrụndụ na ntụrụndụ na ịkụ egwuregwu. Mana ọchịchị a na-amanye ịgbanwe ọnọdụ a, n'ihi na iwu adịghị arụ ọrụ nke ọma, na karịa 400 ebe nrụọrụ weebụ nke ịkụ nzọ egwuregwu iji nweta ụlọ site na Danes. Ọtụtụ akụ na-enye ọbụna asụsụ Danish iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka usoro nhazi ndị ọrụ.
Iwu ọhụrụ na-enye ohere inye ndị ọrụ dịka Ladbrokes na bet365, ọ bụ ezie na steeti nọgidere na-azụ ahịa na agbụrụ nke ụmụ anụmanụ na ịgba chaa chaa, nke dabeere n'ekpere ọma. Na-achọ egwuregwu dịka kaadị na-acha ọkụ na bingo, ebe onye ọkpụkpọ ahụ adịghị eji usoro ma ọ bụ nkà ma dabere na mgbe ụfọdụ.
N'agbanyeghi na enwere ikike iche iche maka ịhazi na iduzi ụlọ ọrụ ịgba chaa chaa Enke Spil na-enweta ụba mgbe mgbanwe nke iwu ahụ dị, a na-ekewa ya ugbu a na ụlọ ọrụ abụọ: Danske Lotteri Spil na Danske Licens Spil. Ndị nke a na-ekpuchi ụlọ ọrụ egwu egwu n'ịntanetị, ma na-ede akwụkwọ na 60% n'oge na-adịbeghị anya ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga.
Taa, Danes nwere otutu ohere maka ịgba chaa chaa. Ha nwere ike igwu egwuregwu dịka poker online megide ndị ọzọ egwuregwu gburugburu ụwa. Ma ọchịchị ndị Danish na-emetụta nnọọ mgbasa ozi na ụlọ ọrụ ikikere nke dị na mba ọzọ site na iwu ndị siri ike.
Ahịa mara mma
Dị ka ọtụtụ ndị Europe, ịhụnanya Danes football na-etinye na otutu nke ụlọ Super League otu. Njikọ Njikọ nke Bekee na-ewu ewu nke ukwuu n'ihi n'eziokwu na a na-egosikarị ya na Satellite Danish (Danes nwere ike ịhụ 280 nke 380 ọkụ kwa oge).
N'oge na-adịbeghị anya, mmụba na-amasị golf, tumadi maka ọganihu nke Thomas Bern. Onye na-eto eto Torbjörn Olesen, o doro anya, ga-eme ka mmasị Fans. Handball na badminton nwetara mmeri ọma, tinyere ndị na-agba ígwè n'ụwa na-emeri ihe nrite n'ọgbọ ịnyịnya ígwè "Tour de France".
Ndị Danes na-egosikwa na egosipụ poker. nmalite mgbasa ozi poker na-eto eto ngwa ngwa mgbe mmeri meriri n'ọgba egwuregwu Gus Hansen na mmalite 2000s. Na Denmark, ọtụtụ ndị na-egwu egwu poker, mba ahụ na-akwado 25th na WSOP ụwa. Obodo Denmark Ịgba chaa chaa na-ahọrọ ebe ndị na-awa poker dị ka Party Poker.
Ọdịnihu nke ịgba chaa chaa na Denmark
Ịgba chaa chaa na Danmark malitere ịmalite ngwa ngwa mgbe iwebata iwu ọhụrụ afọ ahia nke ịgba chaa chaa nke ịgba chaa chaa bụ 4 ijeri DKK.
Otú ọ dị, gọọmentị na-eme ihe niile nwere ike ime iji gbochie ndị na-abụghị ndị na-agba chaa chaa na ebe nrụọrụ weebụ ịgba chaa chaa na-enye ndị Danes ọrụ. Nke a dugara n'eziokwu na naanị na 2012, saịtị 57 ka e dekọrọ na blacklist.
Ọ bụghị ihe ijuanya na, mgbe ọtụtụ ịgba afọ ịgba chaa chaa na Denmark gasịrị, ụlọ ọrụ Inke Spil ka nwere 62% nke ahịa ahụ. Ọ nwere ike iwe oge tupu ndị egwuregwu ndị ọzọ enwee ike ịlụ ọgụ na onye na-ede akwụkwọ, ndị ọrụ ya na-eji iji ọtụtụ ndị Danish.
0.1 Ịgba Chaa chaa na Denmark
0.2 Nchịkọta nke ebe Ntanetị Ntanetị Ntanetị kachasị elu nke 10
3 Ịgba chaa chaa na Denmark
3.0.1 Ebe Denmark na obere akwụkwọ akụkọ ihe mere eme
3.1 Casinos na ịgba chaa chaa na Denmark
3.1.1 Ebe nkiri Copenhagen
3.1.2 Ezigbo mmasị banyere Denmark na Danes
3.1.3 Denmark na map nke Europe
4 Ịgba chaa chaa na casinos na Denmark
4.2 Aalborg ụgbọala
5 Ịgba chaa chaa n'Ịntanet na Denmark
5.0.2 Ahịa mara mma
5.0.3 Ọdịnihu nke ịgba chaa chaa na Denmark